ढुङ्गो, शिशिपस र म
दुर्गा विनय - फलेकको नवनिर्मित सानो चौतारोमा बसेर मगर मामाले तमाखु र मकैको खोसेला निकाल्नुभयो। घाम हतारिएको थियो अस्ताउन। चारघरे गाउँ पछाडिबाट लुसुक्क निस्कन खोजेको देखिन्थ्यो त्यो। सम्पूर्ण आकाश सुन्तले रङ्गमा रङ्गिएको थियो। उदास उदास लाग्थे ती डाँडाहरु।
मौला अली अली !
लक्ष्मण देवकोटा - चुइङ्क्क आवाज छैन. कति भद्र दर्शकहरू ? हजारजना भन्दा बेसी छन् कन्सर्टका सहभागीहरू. छिरिक्क आवाज ननिस्कने त्यो शान्त वातावरणबीच अचानक बत्ति निभ्यो । दर्शकदिर्घाका सबैको आकर्षण मधुरो बत्ती केन्द्रित स्टेजतिर तानियो । मधुरो उज्यालोमा बिस्तारै देखिँदै गए चर्चित पाकिस्तानी शास्त्रीय कब्बाली गायक आसिफ अली खान । तालीको पर्रा छुट्यो ।
दिनकर नेपाल - उ आउँछ, घोडा चढेर होइन गाडीमा गुडेर होइन हेलिकप्टरमा उडेर होइन । उ आउँछ आफ्नै गोडामा मेरै यी दुई हातले बनाएको खडाउ लतार्दै र, उसको खडखड गुन्जिन्छ मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म - 'काल'को युद्धघोष बनेर।
घोडाझैं उफ्रिने जिप
बुद्धिसागर - जिप अगाडि बढ्यो । कर्नाली नदी धेरै तल ट्युबलाइटजस्तै मसिनो भएर टल्किरहेको थियो । धुलेबाटो कहिलेकाहीँ जिपका पांग्रामा ठोक्किएर डुंगाहरू गुरुरुरु खस्थे । गाडी बाहिर धुलो उड्थ्यो भने गाडीभित्र सातो । केटाकेटीहरू बसभित्र असन्तुलित लयका हिन्दी गीत गाइरहेका थिए । केटाकेटीका लागि त मामाघर यात्रा रमाइलो हुने भो । विचरा मामालाई पो आपत परिरहेछ।
मुरली मास्टरको कथा
घनश्याम निरौला - म स्कुल पढ्दा मेरो विद्यालयका प्रिन्सिपल सरले भन्नुहुन्थ्यो, ‘देश बन्न तीनथरि जनशक्ति अत्यन्तै इमानदार हुनुपर्छ, शिक्षक, राजनितिज्ञ र सवारी चालक अर्थात ड्राइभर ।‘ नेपालमा यी तीनैथरि जनशक्तिको इमानदारीको अन्दाज लगाउन सक्छौं हामी, सायद त्यही भएर सर अस्ट्रेलियातर्फ लाग्नुभयो, यो देश अब बन्ला या नबन्ला भन्दै।
एक पत्रकारको नियति
महेश्वर आचार्य - आदित्यले आफ्नो संस्मरणमा पत्रकारितामा लाग्नुका सन्दर्भ र पत्रकार भइसकेपछि विकास पत्रकारिता गरेका प्रसंग बताएका छन् । उनको किताबको उपशीर्षक छ, ‘रोगी, भोगी अनि योगी’ । उनले विवाहपूर्व स्त्रीहरूसँग संसर्ग भएको मात्र बताएका छैनन्, विवाहपश्चात् पनि ५०–६० जना स्त्रीसँग संसर्ग भएको स्वीकारेका छन्।
यसरी बित्यो मेरो कमलरी जीवन
शान्ता चौधरी - म जस–जसको घरमा बसेकी थिएँ, ती घरका छोरीहरू फोन गर्छन् अहिले पनि । अनि ‘अब त तपाईं भन्नुपर्ला हैन ?’ भनेर जिस्कन्छन् पनि । तँ त निकै व्यस्त भइस्, हामीलाई मतलब पनि गर्दैनस् भन्छन् । कतिपयले खाना खानेगरी घरमा आउने निम्तो पनि दिन्छन् । गएको तिहारमा जमिनदारका छोरीहरूसँग मिलेर भैली खेलियो । जब उनीहरूसँग भेट हुन्छ, निकैबेर गफिन्छौं हामी । त्यतिबेलाका कुरा आपसमा उक्काउँछौं।
नर्सले भोगेको लडाइँको घाउ
महेश्वर आचार्य - माओवादीले जुन कारणका लागि हिंसात्मक आन्दोलन गरेका थिए, जसका कारण १३ हजारभन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाए, सयौं बेपत्ता, हजारौं अङ्ग–भङ्ग भए र अहिले माओवादी नै ‘क्यास’ र ‘ड्यास’ बनेर टुक्रिएर संविधानसभाको चुनावै होला–नहोला, संविधानै बन्ला–नबन्ला जस्तो भएका बेला ती जो मरे तिनको ज्यान अनाहकमा त गएन भन्ने गहिरो आशंका ‘खलंगामा हमला’ पढेपछि पुनः तीव्र हुन्छ।
एउटा लडाकुको कथा
खिलानाथ ढकाल - दसवर्षे माओवादी सशस्त्र युद्धको कारूणिक र साहसिक यात्रापछि छिन्नभिन्न भएको भविष्यलाई यथार्थ अभिव्यक्त गर्ने प्रयत्न हो ‘भीषण दिनहरू’ । लेखक नवीन जिरेलले आफ्नो कलिलो बालमस्तिष्क युद्धमा होमिन बाध्य बनाइएका परिस्थितिहरू किताबमार्फत लिपिबद्ध गरी उजागर गर्ने प्रयास गरेका छन्।
ऋषि तिम्सिना - एउटा युवक धान–चामल हाल्ने बोरामा भुइँमा रास लागेका नोटका बिटा धमाधम उठाइरहेको छ । चटक्क मिलाएर लाएको पाइन्ट–सर्टमाथि उसले भिरेको टाई र परिचय पत्रको ढाँचा हेर्दा सायद ऊ कुनै प्राइभेट बैंकको कारिन्दा भएको अनुमान लाउन गाह्रो हुन्न । शिक्षण संस्थाहरुले गर्ने मुद्रा संकलनको यो तरिका विचारेरै त होला विद्वानले बोलेका— ‘यदि शिक्षा महँगो ठान्छौ भने अज्ञानताको मूल्य सोच ।’
जन्मदिनमा देशबासीलाई जी शाहको कविता
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह - पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाडेर नागरिक भएपछि पहिलोपल्ट कविता लेखेका छन्। उनले आफ्नो जन्मदिनको अघिल्लो दिन कविता लेखेका हुन्। पछिल्लो समयमा जिल्ला भ्रमण गर्दा नागरिक अभिनन्दनसहित सम्बोधन गर्न थालेका पूर्वराजाले झण्डै सात वर्षपछि पहिलोपटक जी ...
एक कर्मठ कर्मचारीको कथा
महेश्वर आचार्य - कर्मचारी प्रयागदत्त तेवारीका अनुभव ‘एक घर एक रोजगार’ पुस्तकले नेपालबारे कथाजस्ता लाग्ने विविध रमाइला घटनाका साथै महत्वपूर्ण सूचनाहरू पस्केको छ । पुस्तकमा तेवारीले काम गरेको कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्विस सरकारले सहयोग गरेको जिरी कृषि बुहुउद्देश्यीय फार्म, जर्मन सरकारले सहयोग गरेको गण्डकी कृषि विकास परियोजनाका रमाइला र प्रेरक प्रसंग समेटिएका छन्।
कथाः बिरानो सहर
प्रदीप बगाले - ढलमात्र बगिरहेछ । नदी भन्नै नसकिने । यहीँको कञ्चन पानीमा पौडी खेलेका बाल्यकालीन संस्मरण भ्रामकजस्तै लाग्छन् अहिले । नदी साघुरिँदै गयो । किनारका जग्गा अतिक्रमण गरेर टहरा ठड्याइए । राजधानीभित्रकै उक्त दृश्य राज्यले देखेन ? वा मौन रह्यो ? वा राज्य साँच्चै निरिह छ?
यसरी बनें म कार्टुनिष्ट
राजेश केसी, काठमाडौ, असार २१ - सानै उमेरदेखि म चित्रकलामा रूची राख्थें । केही न केही नकोरीकन बस्दिनथें । स्कुल जाँदा कालोपाटीमा के–के चित्र कोरिरहन्थे । कालोपाटीको कुनामा मैले बनाएको कार्टुन प्रायः रहिरहन्थ्यो । ती साथीभाइ र सरहरूकै कार्टुन हुन्थे ।
धीर भण्डारी - मानिसको मनमा जे इच्छा जागृत हुन्छ त्यो एक न एक दिन पूरा हुन्छ भन्छन् प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक नेपोलियन हिल । हाम्रो नेपाली समाजमा पनि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, तँ चिता म पुर्याउँछु आदि उखानहरु प्रचलित छँदैछन् । यही उखानजस्तै भयो मेरो जीवनमा पनि ।
पञ्चायतका एक हस्तीको कथा
महेश्वर आचार्य - अर्थशास्त्रले कुनै कुराको आँकलन गर्नुअघि एउटा मान्यता अघि सार्छ— यदि अरु कुरा यथावत भयो भने (इफ अदर थिङ रिमेन सेम) यसो–यसो हुन सक्छ । त्यो सन्दर्भ वि.सं. २०४६ सालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्ने हो भने अरु कुरा यथावत् रहेर पञ्चायती व्यावस्था रहिरहेको भए मचिरमान सिंहपछि नेपालको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना नवराज सुवेदीको थियो ।
भाइको हत्यापछि यसरी लडेँ
सावित्री श्रेष्ठ - २०५५ सालमा भाइ उज्जनको हत्या नितान्त प्रेम विवाहका कारण भएकाले हामीलाई गाउँ छाड्नुपर्ने अवस्था थिएन । बालकृष्ण ढुङ्गेललगायत हत्यामा संलग्नहरू माओवादीमा प्रवेश गरेपछि धम्की सुरू भयो । बालकृष्ण झ्यालखाना परेपछि त हाम्रो परिवारलाई तहसनहस पारी लखेट्नु र दाइ गणेशलाई मार्नू भनी उसले निर्देशन दिएको खबर आउन थाल्यो ।
युद्धकथाः घर फर्किएको मानिस
यादव देवकोटा - ऊ मेरो छोरो हो । ऊ नभएको यो सत्र वर्ष मैले आफ्नै मुटुमा किला ठोकेर गुजारेँ। उसका बा गएदेखिन् मेरो मुटुमा जोर किला ठोकिएका छन् । उसको कानको लोतीमा कोठी नभएको भए आफ्नै घर फर्किएको उसलाई चिन्दै नचिन्ने पो रहेछु।
कमलराज लम्साल - बिहे यसरी गर्नुपछ, उसरी गर्नुपर्छ । धुन्धान । पैसा खोज्न सकिन्छ । जग्गा बेच्न सकिन्छ । सरसापट गर्न सकिन्छ । रिन काढ्न सकिन्छ । भनेजस्तो गर्नुपर्छ, एक पटक न हो । जमाना अन्सार । गहना, दाइजो, उपहार । भोज, भतेर । जन्ती, बाजा । ठाँटबाँट, शान । अरुले के भन्लान् ? लहैलहै र उक्साहट । बिहेको भोलिपल्टैदेखि टाउको समाउने मुडमा म पनि थिइन।
साना–साना सिनेमाघरको खाँचो
दीपक रौनियार - विदेशी भाषाको राम्रो चलचित्र हेर्न पाउनु र हेर्नु दोष हुन्थ्यो भने छिरिङरितार शेर्पा, नवीन सुब्बा, भूषण दाहाल, भाष्कर ढुङगाना, अनुप बराल, प्रशान्त रसाइली, अविनाशविक्रम शाह, मिन भाम, निश्चल बस्नेत, अशिफ शाह, मनोज पण्डित, सुवर्ण थापा, प्रचण्डमान श्रेष्ठ, विनोद पौडेल, जोयस पाण्डेहरू चलचित्र निर्देशक नै हुन्थेनन्। यी विदेशी सिनेमाको “एक्सेस”मै हुर्केका हुन्।